ငါတို့ခေတ် | ဥက္ကာကိုကို
စာပေ အနုပညာ မီဒီယာ
Posted by oakkarkoko on August 6, 2012
Posted in: ကဗျာ.	Leaveacomment
အရာရာတိုင်းကိုနားလည်မှုနဲ့ ငါတို့လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ နားလည်မှုဆိုသောစကားလုံးသည် နေရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်းမှာအကြောင်းအရာတိုင်းလိုလို၏ ပြယုဂ်ဖြစ်လာသည်။ ကိစ္စတစ်ခုကိုနားလည်မှုနဲ့ ကိုင်တွယ်ရသည်။ ပြဿနာတစ်ရပ်ကိုနားလည်မှုနဲ့ ဖြေရှင်းရသည်။ ငါတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာနားလည်မှုဆိုတာ ကြီးစိုးလာသည်။
နားလည်မှုကိုနားမလည်ပါကငါတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာရပ်တည်ရန် ခက်ခဲလာမည်။ မခက်ခဲလျှင်လည်းလူအများ၏ အမြင်စောင်းမှုကိုငါတို့ခံရနိုင်သည်။ အမြင်စောင်းသည်ဆိုတာကတစ်ခါတစ်ရံငါတို့ကိုယ်ကိုယ်၌က စောင်းနေ၍ အမြင်များလိုက်စောင်းသွားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ““ဒီကောင်ကနားလည်မှုမရှိဘူး””ဆိုသည့် အသံများကငါတို့နောက်ကွယ်မှာပဲ့တင်ထပ်လိုက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နားလည်မှုကိုငါတို့ နားလည်တတ်ဖို့လိုသည်။
လက်ရှိဖြစ်တည်လျက်ရှိသည့် ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုငါတို့ သုံးသပ်မည်။
အရင်ခေတ်တစ်ခေတ်ကို ပြန်ကြည့်လျှင် အဘေးအဘီအဘင်လူကြီးတွေကငါတို့အဘိုးအဖေလူငယ်တွေကိုနားလည်ပေးခဲ့ရသည်။ အခုခေတ်ကငါတို့ခေတ်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ခေတ်တွင်တော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ များသောအားဖြင့်တော့ ငါတို့ လူငယ်တွေကငါတို့အဘိုးအဖေလူကြီးတွေကို ပြန်နားလည်ပေးလာရသည်။ လူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုနားလည်မှုပေးနိုင်ဖို့ကိုစိတ်တွန့်နေကြသည်ဟုငါတို့ထင်မိသည်။ နားလည်မှုပေးလျှင်လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းသာ ဖြစ်သည်။
ငါတို့ လူငယ်တွေ ဘာလုပ်လုပ် အဆိုးမြင်သည်ဟုမဆိုလိုသော်လည်းကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုတွေကရှိနေသည်။ ဒါကလည်းငါတို့ လူငယ်တွေကိုကောင်းစားစေချင်သော၊ ဖြစ်စေချင်သော၊ တင့်တယ်စေချင်ပြည့်စုံစေချင်သောအဘိုးအဖေလူကြီးတွေရဲ့ ရင်တွင်းစေတနာများဖြစ်သည်။အဲဒါကိုငါတို့နားလည်သည်။သို့ပေမယ့် စေတနာတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထက်ပို၍ ငါတို့အပေါ် ကျော်လွန်ကန့်သတ်လာတဲ့အခါ…..။
ငါတို့ရဲ့ အဘိုးအဖေလူကြီးတွေကငါတို့ကိုဘာကြောင့် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်နေကြသည်ဆိုတာကိုငါတို့ လူငယ်တွေစဉ်းစားလာကြသည်။ ငါတို့ခေတ်ရဲ့ လူငယ်တွေကပင်ကိုယ်ထက်မြက်ပြီးသား မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သည်။ငါတို့မျိုးဆက် သစ်သည်စည်းစနစ်တင်းကျပ်၍ ဘောင်ခတ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံကိုလက်မခံကြတော့သော မျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ သည် စက်ဝိုင်းဖြစ်ဖြစ်၊ စတုရန်းဖြစ်ဖြစ်၊ မည်သည့် ဘောင်တစ်ခုအတွင်းတွင်မှ မနေချင်ကြတော့ဘဲပွင့်လင်းလွတ်လပ်သည့် လူ့ဘောင်ကိုထူထောင်လိုကြသူများဖြစ်သည်။
ငါတို့မျိုးဆက်တွင် ချွန်ထက်သည့်ဆူးများရှိသည်။ ထိုဆူးများဖြင့်ပင် ခတ်ထားသောဘောင်များကိုငါတို့ ထိုးဖောက်ကြသည်။ ဟိုကဖောက်၊ ဒီကဖောက်ဖြင့် ၀န်းရံထားသော ဘောင်များပေါက်ပြဲကုန်သည်။ ထိုအတွင်းမှ ငါတို့ လူငယ်များတိုးထွက်လာကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ငါတို့တွေ ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာများအဖြစ်အလျှိုလျှိုပေါ်လာကြသည်။ ငါတို့အဘိုးအဖေလူကြီးများကလည်းအထိတ်တလန့်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြသည်။ ပေါက်ပြဲသွားသောဘောင်များကိုအလျင်အမြန် လိုက်လံဖာထေးသည်။ ပိုမိုခိုင်မာသည့် သံမဏိဘောင်များဖြင့် ငါတို့ကိုထပ်မံစည်းရိုးခတ်ကြပြန်သည်။
သို့သော်လည်း ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာများဖြစ်ကြသောငါတို့လူငယ်တွေကဟိုမှသည်မှ တိုးထွက်လာကြဆဲဖြစ်သည်။ ဘောင်ခတ်သည့် လူကြီးတွေအပေါ် အပြစ်မြင်စိတ်များဖြင့် ငါတို့ ထွက်လာကြခြင်းတော့မဟုတ်။ နားလည်မှုရှိရှိဖြင့် ငါတို့ ချီတက်နေကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ““ဘောင်ခတ်တာကလူကြီးတွေအလုပ်၊ ထိုးဖောက်ရမှာကငါတို့ရဲ့အလုပ်””ဟူသည့် တည်ငြိမ်သောအသိစိတ်ဖြင့် ငါတို့ အေးအေးဆေးဆေးဖောက်ထွက်နေကြတာပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စတွေအတွက် ငါတို့ လူငယ်တွေဆီမှာမစ္ဆေရိယမောဟစိတ်တွေ လားလားမျှမရှိ။
ဟိုဟာမလုပ်ရ၊ ဒီဟာမလုပ်ရဟုတင်းကျပ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်ကုဋေကုဋာကြားမှပင် ငါတို့ လူငယ်တွေက ဖြစ်အောင်လုပ်နေကြသည်။ လူငယ်ကွန်ယက်ကလေးတွေ၊ လူငယ်ပရဟိတလေးတွေကဟိုတစ်ခု၊ ဒီတစ်ခုနေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ဖြစ်ထွန်းလာသည်။ ပညာရပ်များကိုလူငယ်များအချင်းချင်း ပြန်လည်သင်ကြားသည့်စနစ်ကိုငါတို့တတွေ ကျင့်သုံးလာကြသည်။ နားလည်တတ်ကျွမ်းသည့် လူငယ်များကနားမလည်မတတ်ကျွမ်းသေးသည့်လူငယ်များကို မျှဝေခြင်းဖြင့် ငါတို့ရဲ့ လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုအရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာချီတက်လာနေသည်။
မဖွံ့ဖြိုးသေးသည့် ကျေးလက်ဒေသများတွင် တစ်နိုင်တပိုင်စာကြည့်တိုက်များအစီအရီပေါ်လာသည်။ငါတို့ လူငယ်များကိုငါတို့လူငယ်များကနားဖွင့်ပေးကြသည်။ မျက်စိဖွင့်ပေးကြသည်။ ပါးစပ်များဆွဲဖွင့်ပေးကြသည်။ တရုတ်ဒဏ္ဍာရီလာမျောက်သုံးကောင်ပုံပြင်ကိုငါတို့ခေတ်လူငယ်တွေ လက်မခံကြ။
လူမှုရေးပရဟိတများ၊ စာဖတ်ဝိုင်းများ၊ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲများ၊ သွေးလှူဒါန်းပွဲများ၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများ…… ပွဲများ… လုပ်ငန်းများ။ ငါတို့လူငယ်တွေကိုငါတို့လူငယ်တွေကဦးဆောင်ပြီးတိုးတက်သည့်လူငယ်ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုငါတို့ ထူထောင်နေကြသည်။ ထိုင်နေသောလူငယ်တွေကိုထရပ်လာအောင် ငါတို့ ဆွဲထူကြသည်။ ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကိုယ် လုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုတာကိုငါတို့ ခေတ်လူငယ်တွေ လက်ခံသဘောပေါက်ထားကြသည်။အရည်အသွေးပြည့်စုံသည့် ခေတ်လူငယ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာစေရန် တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုငါတို့ ဖြည့်ဆည်းနေကြသည်။
ဒါကိုပင် ငါတို့ရဲ့ အဘိုးအဖေတွေကမျက်စိစပါးမွှေးစူးကြသည်။
““ဒီကောင်တွေကဘာကောင်တွေမို့လို့ ဒီလိုတွေ လုပ်ရမှာလဲ။ လူ့ဘ၀အတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရှိလို့လဲ။ နို့နံ့မစင်သေးဘဲနဲ့ ဒါတွေလုပ်စရာမလိုဘူး။ ကလေးကကလေးလိုနေစမ်းပါ”” စသည့် စကားသံများပွက်လောညံ
လာသည်။ ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘဲလုပ်သည့်သူတွေကိုတားမြစ်ချင်သည့် စိတ်ကလေးတွေ အနေအထိုင်မတတ်စွာပေါ်လာကြသည်။ စိတ်ထဲတွင် လက်မခံဖြစ်နေကြရာမှ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် တားမြစ်လာကြသည်။
သို့သော်လည်းငါတို့ လူငယ်တွေက ““အေးဆေးပဲ”” ဖြစ်သည်။ အရှိန်ပြင်းပြင်းစီးဆင်းနေသောရေစီးကြောင်းတစ်ခုကိုမည့်သည့်တာတမံနှင့်မှ ငါတို့ အပိတ်အဆို့ မြေဖို့မခံကြ။ အပ်ပေါက်ရာခန့်ပင်သေးပါစေ။ ရသည့်အပေါက်မှ ထိုးဖောက်ကြမည့် ငါတို့ မျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ပိတ်ဆို့သောလူကြီးတွေကိုပင် ငါတို့ကနားလည်မှုရှိရှိ၊ သဘောထားကြီးကြီးထား၍ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကိုယ် ငါတို့ ဆက်လုပ်နေကြမည်သာဖြစ်သည်။
““ဒီလိုလုပ်လို့မရရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လုပ်ကြမလဲ”” ဆိုတာကိုငါတို့ လူငယ်တွေကအမြဲအဖြေရှာနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ငါတို့ခေတ်လူငယ်တွေကိုလွယ်လွယ်နှင့် တားဆီးလို့ လုံးလုံး၀၀မရ။
ဒီစာကိုဒီလိုရေးတဲ့အတွက် ငါ့အပေါ်မှာငါတို့အဖေအဘိုးတွေကမကျေမနပ်ဖြစ်ကြမည်ကိုငါသိသည်။ သို့သော် လည်းသူတို့သိအောင် ငါရေးရမည်။ ငါတို့ရဲ့ အဘိုးအဖေတွေသည်လည်း သူတို့ရဲ့လူငယ်ဘ၀မှာ သူတို့အဖေအဘိုး (ငါတို့ရဲ့အဘီအဘင်) တွေကိုမကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်မည်။ ငါတို့ရဲ့ အဘီအဘင်တွေကလည်းသူတို့ကိုတင်းကျပ်သည့် စည်းဘောင်များဖြင့် ကန့်သတ်ခဲ့ကြလိမ့်မည်။ သူတို့လည်းထိုအချိန်ကဘောင်စည်းရိုးတွေကို ချိုးဖောက် တိုးထွက်ခဲ့ကြ လိမ့်မည်။
ထိုအကြောင်းခြင်းရာများကိုသူတို့ပြန်လည်တွေးတောသင့်သည်။ အတိတ်ကာလများကို ပြန်လည်တွေးတော မြင်ယောင်ပြီးသောအခါ ပြန်လည်ဆင်ခြင်သင့်ကြသည်။ ထို့နောက် ငါတို့အပေါ်မှာနားလည်မှုတစ်ခုခုကိုပေးဆောင်သင့်သည်။ ငါတို့ခေတ်လူငယ်တွေအပေါ် ကာရံထားတဲ့ စည်းရိုးတချို့ကို ဖြုတ်သိမ်းပေးသင့်ကြသည်။ ဆိုးရွားသောလမ်းလွဲမရောက်အောင် ကန့်သတ်မှုတချို့ကိုတော့ ငါတို့လက်ခံလိုက်နာကြရမည်။ ကောင်းစေချင်သောဆန္ဒနှင့် တမင်သက်သက် ချုပ်ချယ်မှုတို့ကိုငါတို့ခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ ငါတို့မျိုးဆက်သည် ငတုံးများမဟုတ်။
ထိုသို့ လူကြီးနှင့် လူငယ်များတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် နားလည်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြမည်ဆိုလျှင် ငါတို့အသက်ရှင်ရပ်တည်နေသောယနေ့ လူ့ဘောင်သည် မြန်ဆန်စွာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာပေလိမ့်မည်။
ငါတို့ခေတ်မျိုးဆက်သစ်သည် ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားများမဟုတ်။ သို့သော်လည်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေထိုင်၊ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးစားသောက်ကာလေးနက်သည့်အတွေးအမြင်ရှိကြသူများပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်အောင်လည်းငါတို့တတွေ ကျင့်ကြံနေထိုင်ကြရမည်။
လူကြီးတွေရဲ့အမြင်မှာငါတို့သည် ဟေးလားဝါးလား လမ်းသလားနေကြသူများဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော် ငါတို့လူငယ်များသည် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြင့် ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းနေကြသူများဖြစ်သည်။ ငါတို့ကိုအပေါ်ယံအမြင်ဖြင့် တိုင်းတာဆုံးဖြတ်၍မရ။ ငါတို့သည် နောင်တစ်ခေတ်ကိုခေါင်းဆောင်ကြမည့်သူများဖြစ်သည်။လမ်းမှားရောက်နေသူများကိုငါတို့ကလမ်းမှန်ပေါ် ဆွဲတင်ကြရမည်။နောင်လာမည့် ငါတို့နောက်က မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုအတွက် ငါတို့ လမ်းဖောက်ပေးခဲ့ကြရမည်။ပွင့်လင်းလွတ်လပ်မှုကိုယဉ်ကျေးစွာဖြင့် ငါတို့ဖော်ဆောင်ကြရမည်။
ငါပြောဆိုနေတာတွေ ကြီးကျယ်ကောင်းကြီးကျယ်နေလိမ့်မည်။ သို့ပေမယ့် ငါတို့ခေတ်မျိုးဆက်ကိုက ကြီးကျယ်သော မျိုးဆက်ဖြစ်သည်ကိုငါတို့မမေ့လျော့သင့်။
နားလည်မှုနှင့် လည်ပတ်သော ယန္တရားခေတ်ကြီးမှာငါတို့တွေ အရာရာကိုတတ်နိုင်သရွေ့ နားလည်ပေးနိုင် ကြရမည်ဟုငါထင်သည်။ တစ်ဦးတစ်ဖက်တည်းနားလည်မှုရှိခြင်းဖြင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုအစပြုကာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိခြင်းသို့ ဦးတည်လာလျှင် ပြဿနာများသည်ပြေလည်လာလိမ့်မည်ဟု ငါမြင်သည်။
ငါတို့ခက်ခဲပင်ပန်းကြရသလိုပင် လာမည့်မျိုးဆက်သည်လည်းအတော်အတန်တော့ ခက်ခဲပင်ပန်းကြရဦးမည်။ အဘိုးအဖေများသည် အဘေးအဘီများနှင့် ခေတ်ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရသည်။ ငါတို့သည်လည်းအဘိုးအဖေများနှင့် ခေတ်ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ငါတို့သားသမီးများသည်လည်းသူတို့၏ခေတ်ပြဿနာကိုငါတို့နှင့် ရင်ဆိုင်လာကြလိမ့်မည်။ ငါတို့ကိုပြန်၍ နားလည်ပေးကြလိမ့်ဦးမည်။
ယခုငါတို့မျိုးဆက်သည် ငါတို့၏ ရှေ့မျိုးဆက်ဖြစ်သောအဘိုးအဖေများနှင့် နားလည်မှုရယူကြရဦးမည်ဖြစ်သလိုငါတို့၏ နောက်လာမည့်မျိုးဆက်တစ်ခုနှင့် နားလည်မှုကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ကြရလိမ့်ဦးမည်သာဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာသည့် ခေတ်နှင့်အညီအသစ်အသစ်ဖြစ်ထွန်းလာနေမည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းပြဿနာတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။
မျိုးဆက်တိုင်းသည် ထိုပြဿနာကိုမလွဲမရှောင်သာ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ကြရဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဖြင့်….. ငါတို့ နားလည်မှု ရှိကြရပေမည်။
← ““၀ံသရမ်းနှင့် ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲ””
ဒို့ဘော်ဒါကြီးများ စစ်ထဲဝင်ရင်လေ (၁) →
အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း
ဒါ.... နိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါ ကဗျာဝိညာဉ်တစ်ခုရဲ့ လွင့်မျောခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် သုညတစ်လုံးကို ..... လက်ထဲမှာကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ရင်း ရွာသွန်းနေရတဲ့ .... အနံကြီးကွင်းကျယ် ကဗျာထမ်းလမ်းလျှောက်တစ်ကောင်။ ကဗျာအယောင်၊ စာပေအယောင် သတင်းထောက်အယောင်၊ ဘလော့ဂါအယောင် အယောင်ပေါင်း တစ်သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ကိုယ့်မင်္ဂလာ ကိုယ်ဆောင်ပြနေသူသာ......။
7Day Daily (2)
197252 is your Facebook account recovery code
ကျိန်စာသင့်သော, get back on Fa cebook with one click
ဖို-မ ဆက်ဆံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ပညတ်တော်များ(အစ္စလာမ်)
““ဘိုင့် ဘိုင် ချက်ကြီး””
သ on ဖို-မ ဆက်ဆံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း…
ဝေလ on မောင်ဥက္ကာနှင့် အပြောအဆို
kyinnarthu on ““အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော…
http://letusfeast.co… on သြစတေးလျနိုင်ငံမှ မာစတာဘွဲ့ကို…
Http://Www.Luckyridg… on သြစတေးလျနိုင်ငံမှ မာစတာဘွဲ့ကို…
မွန်ရာ on ဥက္ကာကိုကို(သံတွဲ)အကြောင်းတစေ့တ…
aungaungline on နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိ…
Anonymous on ခရီးသည်
shwepoesone on ငါသေခဲ့သော်…..
မွန်ဆွေဆွေ on ဥက္ကာကိုကို(သံတွဲ)အကြောင်းတစေ့တ…
Anonymous on ““အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော…
wannachitwin on မမျှော်လင့်သောအရှုံး
ko ko on ဥက္ကာကိုကို(သံတွဲ)အကြောင်းတစေ့တ…
ကံမသား on ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့မောင်ဥက္ကာ
ကံမသား on လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ လွဲမှားခြင်း ဒဏ္ဍ…
ကျနော့်ရဲ့ FB Profile
ကျနော့်ရဲ့ FB Page
ShweDaGon Pagoda in myanmar.
Dun fife night.
ပါရမီရှင်လေး မေသက်ထားဆွေရဲ့ အနုပညာ
တစ်ပတ်အတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများကို တစ်စောင်တည်းဖတ်ရုံဖြင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိလိုရင်... 7Day News ကို ရွေးလိုက်ပါ.....။ (သတင်းထူး၊ ဆောင်းပါးများ၊ ကဏ္ဍစုံလင်စွာဖြင့်....) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- ၇၂၁၅၇၈ ၊ ၂၄၃၅၄၂။
ရှူံးနိုင်နှစ်တန် ခုခံတိုက်ခိုက် ကျော၌ဒဏ်ရာ မထိသာ..... ရင်မှာထိမှ မြတ်ရာ၏......။ ။ (သခင် ထိပ်တင်ကိုယ်တော်ကြီး)
ကဗျာ ကံ့ကော်ရွာ ချစ်သူတစ်ဦးအတွက် စာပေ နက္ခတ်သတင်း မဂ္ဂဇင်းကဗျာ မင်းဝေအောင် ရသ ရသအက်ဆေး သရော်စာ အိပ်မပျော်တဲ့ကဗျာ အွန်လိုင်းကိစ္စ ဆောင်းကဗျာ ဆေးကွဲပြီးရေးတဲ့ကဗျာ ပြောမယ်
7Day Daily 7DAY NEWS Journal Update News ကဗျာ ခံစားချက်တွေ ဓာတ်ပုံ ပန်းချီဆောင်းပါး ရသစာစုလေးများ ရုပ်သံ လတ်တလောသတင်းများ သတင်းဆောင်းပါး သရော်စာ ဟာသများ အက်ဆေး အင်တာဗျူး ဆောင်းပါး ရောက်တတ်ရာရာ ပြောချင်တာပြောမယ် ၀တ္ထု